အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၇) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on July 29, 2013 at 10:00 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၁၆ after (preposition)ပြီးနောက် (၀ိဘတ်) ; afterwards (adverb) ထို့နောက် (ကြိယာဝိသေသန)
After သည် ၀ိဘတ်ဖြစ်သည်။ သူ့နောက်မှ နာမ်ဖြစ်စေ၊ ving ပုံစံဖြစ်စေလိုက်နိုင်သည်။
We ate inarestaurant after the film.
After seeing the film, we ate inarestaurant.
After သည် ၀ိဘတ်မဟုတ်ပါ။ afterwards, then or after that တို့နှင့်အဓိပ္ပါယ်တူမသုံးပါ။
A We went to the cinema and afterwards (then/after that) we ate in a
(NOT . . . and after we ate inarestaurant.)
၁၇။ after all ဘာပဲပြောပြော၊ နောက်ဆုံးတော့၊ တကယ်တော့
၁။ After all သည် မျှော်လင့်တာကတစ်ခု၊ ဖြစ်လာတာကဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုဆိုသည်ကိုပြသည်။ Although we expected something different. တစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်ထားသော်လည်း ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။
I'm sorry. l thought l could come and see you this evening, but I'm not
၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီညနေခင်ဗျားကိုလာတွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာ ဒါပေမယ့် လုံးဝမအားဘူးဗျာ။
l expected to fail the exam. but l passed after all.
၂။ after all ကို လူတို့မေ့နေတတ်သည့် လိုအပ်သည့်အချက်တစ်ခု/ အရေးပါသည့်အချက်တစ်ခုကို အစဖော်ပေးရန်လည်းသုံးနိုင်သည်။
lt's not surprising you're hungry. After all, you didn't have breakfast.
မင်းဆာတာအံ့သြစရာတော့မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ မင်းမနက်စာမှမစားခဲ့ဘဲ။
l think we should go and see Granny. After all, she only lives ten miles
away, and we haven't seen her for ages.
၁၈။ afternoon, evening and night နေ့လည်၊ ညနေခင်း ဤသုံးခုသည်သို့လောသို့လောဖြစ်တတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ အလင်းရောင် ရှိသေးသည်အထိ afternoon နေ့ခင်းဖြစ်သည်။ မှောင်စပျိုးလာလျှင် ညနေခင်းသို့ပြောင်းပြီဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နှစ်တစ်နှစ်၏အချိန်နှင့်လည်းဆိုင်သည်။ နွေရာသီတွင် ညနေခြောက်နာရီထိုးလျှင် အလင်းရောင်ရှိနေလျှင်ပင် afternoon ဟုမပြောတော့။ ဆောင်းရာသီတွင်တော့ မှောင်နေသော်လည်း ငါးနာရီလောက်အထိ afternoon ပြောတုန်းဖြစ်သည်။ ညနေခင်းမှညသို့ပြောင်းချိန် သည် အိပ်ယာဝင်ချိန်ဖြစ်သည်။
Good evening သည် ‘Hello’. ဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သလို Good night သည် ‘Goodbye' ဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမှတ်သားသင့်သည်။ တွေ့ဆုံချိန်နှုတ်ဆက်ရန်မည်သည့်အခါမှ မသုံးပါ။ သင်သည် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့ ည ၉ နာရီခန့်ဝင်သွားပါက ဆိုင်ဝန်ထမ်းမှ good evening ဟုနှုတ်ဆက်မည်ဖြစ်သော်လည်း ည ၉ နာရီခန့် ဆိုင်မှပြန်ထွက်လာပါက ဆိုင်ဝန်ထမ်းမှ good night ဟုနှုတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
A: Good evening. Terrible weather, isn't it?
B: Yes. dreadful.
A: Hasn't stopped raining for weeks. Well, l must be going. Good night
၁၉။ ages အသက်
လူတွေ၏အသက်ကို be + number ဂဏန်းနှင့်ပြောလေ့ရှိသည်။
He is thirty-five. သူအသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီ။
She will be twenty-one next year. နောက်နှစ်မှာ သူ့အသက် နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ။
သို့မဟုတ် be + number + years old ဖြင့်လည်းပြောသည်။
He is thirty-five years old. သူအသက်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီ။
He is thirty-five years. ဟုမသုံးပါ။
လူတစ်ယောက်၏အသက်ကိုမေးရန် How old are you? ဟုမေးပါ။ What is your age?
be + . . . age (preposition မပါ) ပုံစံအားသတိပြုပါ။
When l was your age, l was already working. မင်းအရွယ်တုန်းက ငါအလုပ်လုပ်နေပြီ။
The two boys are the same age. ကောင်လေးနှစ်ယောက်သည်အရွယ်တူဖြစ်သည်။
She's the same age as me. သူသည်ကျွန်တော်နှင့်အရွယ်တူဖြစ်သည်။
၂၀။ ago လွန်ခဲ့သော
၁။ Position တည်နေရာ
အချိန်ပြစကားလုံး + ago
l met her six weeks ago. သူမကို လွန်ခဲ့သောခြောက်ပတ်ကဆုံခဲ့တယ်။ (NOT . . . ago six weeks)
lt all happenedalong time ago. ဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီပေါ့။
How long ago did you arrive? ရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
Ago အား အတိတ်ကာလ past tense နှင့်သာသုံးသည်။ present perfect နှင့်မသုံးပါ။
She phonedafew minutes ago. (NOT . . . She has phoned )
‘Where's Mike?' 'He was working outside ten minutes ago.'
ago and for ခြားနားချက်
l went to Spain six weeks ago. ( = six weeks before now)
စပိန်ကို လွန်ခဲ့သောခြောက်ပတ်အကြာက သွားခဲ့သည်။
I went to Germany for six weeks this summer. ( I spent six weeks in Germany.)
ago and before ခြားနားချက်
two years ago = two years before now လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က
two years before = two years before then (beforeapast time) ---မတိုင်ခင်နှစ်နှစ်က
Two years ago, I visited my home town, which l had left two years before.
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်က သူ့မတိုင်ခင်အရင်နှစ်နှစ်က ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ဇာတိမြို့ကိုလည်ပတ်ခဲ့တယ်။
Permalink Reply by sweetysuthae on July 29, 2013 at 13:08
Permalink Reply by sweetysuthae on July 29, 2013 at 13:10